Dhibka Ay Leedahay Dhalasho Wadan Kale Markaa Qaadato: Akshay, Alia, Deepika Iyo Jilayaasha Bollywoodka Loo Diiday Inee Codkooda Dhiibtaan Doorashada Dalkooda (+Sawiro) – Filimside.net
Dhibka Ay Leedahay Dhalasho Wadan Kale Markaa Qaadato: Akshay, Alia, Deepika Iyo Jilayaasha Bollywoodka Loo Diiday Inee Codkooda Dhiibtaan Doorashada Dalkooda (+Sawiro)
11 April dalka India waxaa ka bilaawatay doorashada baarlamaanka aqalka hoose waxayna ku ektahay 19 May isla sanadkaan 2019 shaqsi walba oo muwaadin India ah doorashadan wuu ka qeyb galayaa oo codkiisa ayuu dhiibanayaa.
Balse waxaa jiraan qaar kamid ah jilayaasha Bollywoodka oo laga mamnuucay ine codkooda ka dhiibtaan doorashadan sababo la xariira inee dalalkle dhalashooda qaateen oo ay heestaan baasaboor ama kaarka dhalasho dal kale ah hoos kaga bogo liiska jilayaashan la shaaciyay:
Akshay Kumar: wuxuu kasoo jeeda Punjab waana hindi wuxuuna ku bar-baaray Delhi balse waxuu heestaa ama qaatay baasaboor Canada ah taasi oo sababtay in laga mamnuuco doorashooyinka dalka India.
Deepika Padukone: Xiddigtaan waa reer Bangalore una dhalatay dalka India balse waxay ku dhalatay Denmark dhalasho Denmarka ayaana la siiyay taasi oo sababtay in aysan ka qeyb gali karin guud ahaan doorashooyinka India.
Alia Bhatt: Xiddigta waqtigaan hogaanka Bollywoodka qabatay waa loo diiday inee codkeeda ka dhiibato doorashooyinka Dalka India maadama ay heesato ama qaadatay dhalasho baasaboor British ah.
Katrina Kaif: Waa gabar muwaadin ingiriisi ah maadama ay kudhalatay kuna barbaartay London baasaboor UK ayee heesata hooyadedna waa reer London halka aabahed Hindu yahay mudo 17 sano kudhowaad Kaif doorasho India ka dhacday codkeeda kama dhiiban.
Sunny Leone: Xiddigtaan waxay heesata dhalasho Canada ah inkastoo ay asal ahaan India kasoo jeedo.
Jacqueline Fernandez: Jacqueline hooyaded Malaysia ayee kasoo jeeda halka aabahed uu udhashtay Sri Lank iyada qudheeda waxay ku dhalatay Bahrain sidaa aawged waa gabar reer Sri Lankan ah xaqna uma lahan inee codkeeda ka dhiibato doorashooyinka India.
Imran Khan: Dhalasho mareekan ayuuba heestaa ama kaarka cagaarka ah inkastoo uu asal ahaan India kasoo jeeda waxaana abti u ah Mr.Prefectionist Aamir Khan hadana saas eetahay waa laga mamnuucay doorashooyinka dalka India inuu codkiisa ka dhiibto.